Madaxweyne Farmaajo oo kulan gaar ah la qaatay Boqorka dalka Urdun – WARSOOR
Madaxweyne Farmaajo oo kulan gaar ah la qaatay Boqorka dalka Urdun
Urdun – (warsoor) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maalinimadii shalay kulan gaar ah kula qaatay Aqwalka Boqortooyada Boqor C/laha labaad
Kulankaasssi waxaa labada madax ay kaga hadleen arimaha Soomaaliya,gaar ahaan sidii gacan looga geysan lahaa soo celinta iyo xaqiijinta amniga iyo kala dambeynta dadka Soomaaliyeed.
Kulankaasi waxaa la isla qaatay in heer goboleed iyo mid caalami ahba dadaal loo galo sidii loo cirib tiri lahaa kooxaha argagixisada
Bqorka dalka Urdun C/laha labaad ,oo ka hadlay kualnkaasi waxa uu ka mahadceliyay qaabkii ay u dhacday doorashadii uu ku soo bacay Madaxwen Farmaajo,wuxuuna ballanqaaday in ay dowladdiisu tageero wax ku ool ah u fidin doonto dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo isna ka hadlay kulankaasi gaarka ah ayaa ka mahadceliya dadaalka Boqortoyada Urdun ay mar-walba la garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed.
Kulankaasi waxaa goobjoogayaal ka ahaa Wasiirka Arimaha Dibadda Soomaaliya C/salaam Hadliye iyo Safirada Soomaaliya ee Sacuudiga iyo Masar,halka dhianaca kale ay soo xaadiree diiwaanhayaha boqortooyada urudun, La taliyaha arimaha amiga ahna taliyaha nabadsugidda iyo Abaanduulaha ciidamada iee xafiiska boqorka iyo la taliyaha boqorka.
Arab Summit’s 28th ordinary session begins
Qodobadii Ka Soo Baxay Wada-Hadlada Somaliland Iyo Khaatumo Ee Shirka Djibouti
Muqdisho – (WARSOOR) – Shir labo cisho Magaalada Muqdisho uga socdey Taliska Ciidanka AMISOM iyo Taliska Ciidanka Xooga Dalka ayaa la isku afgartey oo ku soo gabagaboobey in taliska Ciidamada…
MUQDISHO – (WARSOOR) -Madaxwaynaha Maraykanka Joe Biden ayaa safiirka cusub Soomaaliya usoo magacaabay Larry André, safiirkan ayaa badali doona Donald Yammamota. Waxa uu ahaa safiirki Maraykanka ufadhiyay Djabuuti Tan iyo…